पूर्वराजा ज्ञाने`न्द्रको गजबको शाहस, आफै गाडी चलाएर ५ सय किलो`मिटरको यात्रा ९ घण्टामा पुरा गरेर झापा देखि निर्म`ल निवास !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/पूर्वराजा ज्ञाने`न्द्रको गजबको शाहस, आफै गाडी चलाएर ५ सय किलो`मिटरको यात्रा ९ घण्टामा पुरा गरेर झापा देखि निर्म`ल निवास !!
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह ७१ वर्षको उमेरमा झापा वाट आफै गाडी चलाएर काठमाडौं आइ`पुगेका छन् । उनी झापावाट ५ सय किलो मिटरको दुरी गाडी चलाएर काठमाडौं आइपुगेका हुन् । दुई महिना अघि झापा गएका पूर्वराजा लकडाउनका कारण झापामै अड्किएका थिए । उनले काठमाडौं आउन पास माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको निवेदन गृहमन्त्रालयले अस्विकार गरेको थियो ।
सामाजिक सञ्जा`लमा निकै विरोध भएपछि विहि`वार साँझ उनले पास पाएका हुन् । कोरोना भाइरसको म`हामा`री र लक`डाउनका कारण झापमै रहेका पूर्वराजा शाहले झापादेखि काठमाडौं सम्म पाँच सय किलो मिटर भन्दा बढी आफैंले ड्रा इभ गरेका हुन् ।
झापाबाट पत्नी कोमललाई गाडीमा राखेर शुक्रवार बिहान साढे ८ बजे हिँडेका पूर्वराजा बेलुकी ५ वजे निर्मल निवास आइपुगेका थिए । उनले महोत्तरीको बर्दि वासमा केही समय खा नपिनका लागि अल मलिएका थिए । दमकमै बनाएको खानेकुरा उनीहरूले लिएका उनले वर्दि वासमा आएर खाएका हुन् ।
झन्डै नौ घन्टा लामो दुरी गाडी चलाएर काठमाडौं आइपुग्नु पूर्वराजाका लागि जीवनकै सम्झन योग्य दिन हुनसक्छ । सडक खाली भएका कारण पनि उनलाई गाडी चलाउन भने केही सहज भएको हुनसक्छ । तर यति लामो दुरीमा आफै गाडी चलाएर काठमाडौं आउन गरेको उनको साहस भने तारिफयोग्य छ ।
करिव एक घन्टा खानाका लागि रोकिएपछि बीपी राज मार्गको बाटो भएर उनीहरू काठमाडौँ आइपुगेका हुन् यो उमेरमा पनि नौ घन्टा निरन्तर गाडी चलाउनुले पूर्वराजा शाहमा आत्म विश्वास ग ज्जबको भन्दै सामाजिक स ञ्जालमा तारिफ गरिएको छ ।
लकडाउनले गर्दा श्रीमान बिदेशमा रोकिए, नेपालमा श्रीमती र छोराछोरि सबैलाई पहिरोले बगायो (तस्विर सहित)